Saameynta Uu Ku Yeelan Karo Manqddiqada Heshiiska Ethiopia Iyo Eriteria – War La Helaa Talo La Helaa
Ka dib markuu cadeeyay PM Abiy Ahmed Jun 4, 2018 inuu ogol yahay go’aamadii hore ay soo gaareen gudigii aduun waynaha u xilsaareen inay go’aan ka gaaraan xuduuda labada dal ee murunka ka dhaxeeyay 1998-2000 (international commission’s) go’aamadaas ay soo sareen gudiga waxaa diidanaa markasta in la fuliyo Dowladahii Ethopia ee ka horeeyay PM. Ahmed.
Ogolaasha go’aamada International Commission waxay noqotay rajadii nabda lagu ay ku heshiis lahaayeen.
Curinta nabada waxay suurto gelisay in labada dal ay nabad noqdaan, dayaaradihii ay isku xiraan labada caasimadood, in Ethiopia markale ay hesho furdo si ay uga maaranto furdaha kale ee ka fog ee Geeska Africa, in xiriirkii dipolomaadiyadeed dib loo soo cesho.
Waxa ugu muhiimsan ee uu heshiiskaas keenay in lagu heshiiyo xaduuda labada dal ee 20 sano la soo dhaafay uu muranka ka taagnaa, inkastoo ay jiraan xaqabado hor istaagi karo inuu heshiiskaan dhaqan galo, tasoo ah hadaan laga qayb gelinin ama aysan raali ka ahayn dadka Ethopiaan ee degan xuduuda waxaa hubaal ah in heshiiskaan fulitaankeeda uu adkaan doono, waana cabsida jirta, lakiin xoogaga heshiskaan wado awgeed waa mid laga gudbi karo.
Fa’idada laba dal :
ERITREA, fa’idada ayku qabaan heshiiskaan waxay tahay, in Ethiopia ay isticmaasho furdadooda si ay lagac canshuur badan uga helaan, in laga qaado cuna qabateenkii saarnaa dalkooda, si meel iskaga dhigaan murankaan oo ay u soo jeestaan hurumarinta dalkooda iyo dadkooda, maadaama ay dhaawacday dhaqaalahooda.
ETHOPIA, waxay dooneeysaa inay murankaas iska xirto waxay heleeysaa bad, maadaama ay leedahay 100 milyan oo dal xiran ku nool, tasoo ka hor istaagi karta hurumarinta dalkeeda iyo dadkeeda, ayna ka maaranto furdadaha ka fog fog ee dalalka aan xasiloonayn nabadooda ay leeyihiin sida Soomaaliya oo kale.
HADABA SIDUU KU DHACAY HESHIISKAAN?
Heshiiskaan ma ahayn mid hal mar oo kaliya iska dhacay waa mid mudo laga soo shaqeeynaayay oo ay dowlado iyo hay’ado badan ayku lug lahaayeen oo in mudo ah hoos loo waday. Biloowga arinkaan waxaa bilawgiisi lahaa qolo diimeed ka yiraahdo World Council of Churches oo ay wafdi u diray Asmara September 2017 si ay u darsaan sida ugu wanaagsan ee labada dal ay u wada hadli karaan oo meel dhexe loogu kulmi karo (common ground)
Sidoo kale waxaa safar ku tagay labada dal Donald Yamamoto, Assistant Secretary of State for Africa, waa diplomacy-ka ugu aqoonta badan dhanka Africa oo heshiiskaan inuu hirgalo gacan wayn ku lahaa.
Sida la xaqiijiyay waxaa wada hadalo Hoose ku yeeshay Washington wasiirka arimaha dibada Eritrea Dr. Osman Salah iyo la taliyaha Madaxwaynaha Eritrea Yemsne Gebreab iyo wafdi uu hogaaminaayay Raisal Wasaarihii Hore ee Ethiopia Hailemariam Desalegn, shirkaasi wuxuu gogol xaar u noqday inuu heshiiskaas maanta guuleesytay. Taasi waxay ku tuseeysaa in muruqa diplomacy-yadeed ee Mareeykanka uu meesha ka muuqdo.
Waxaa kaloo ayadana mudan in la tilmaayo saxiibada Carbeed ee Eritrea ay xoog ku lahaayeen inuu fulo heshiiskaas, kuwasoo kala ah Sacuudiga iyo Emaratiga, ayagoo ku bixiyay lagac iyo waqti badan geliyay inuu arinkaan suurto galo, waxayna balan qaadeen in Eritrea Iyo Ethiopia ay siinayaan balaayiin doolar oo lagu hor mariyo dalkooda.
Waxaa kaloo ayadana jirtay UN iyo African Union ay hoos ugu shaqeeynaayeen inuu fulo wada hadalkaan, UN Secretary General, Antonio Guterres wuxuu tagi doonaa Addis Ababa si looga qaado cuna qabateenka dalka Eritrea.
Hadaba walaalyaal, Waxaan aaminsanahay in arinkaan uusan ka marnayn tartan dhaqaale oo laaga hor tagaayo Soomaaliya iyo Turkiga, waa in walaalaha Soomaaliyeed ay fahmaan qof baahan ma dhoowran karo qadiyad, hadii lagaa dhaqaalo bato waxaa hubaal ah in lagu xukumi doono, taas awgeed waxaan rabaa in walaalaha Soomaaliyeed ay fahmaan arimaha ka socdo Geeska Africa iyo sida loogu gurmaday dowladaha deriska si nabada iyo hurumarinta Gobolka Geeska Africa xowliga uu ku socdo, in soomaalida ay la yimadaan heshiis si loogu midoobo xoojinta iyo dib u dhiska dalkeena, hadii kale waxaa hubaal ah in bur bur iyo hoog ayku dambayn doonaan jiilka dambe ee Soomaaliyeed, waxaana masuuliyadaas qaadi doono qofkastoo naga mid ah.
W/Q:- Sheikh Nour Abubacar
Maxaa ka Taqaannaa Shakhsiyadda Safiirka Cusub Ee USA Ay Usoo Magacawday Soomaalia